Taariikhda baarlamaanka Soomaaliya – Xildhibaanimooy Xaal qaado! | Explorations in History and Society
Taariikhda baarlamaanka Soomaaliya – Xildhibaanimooy Xaal qaado!
Wax Soo Saarka Xildhibaanada Somalia Mooshin Mooshin Mooshin Cusub
Bar AMA Baro – Qormadan, waxaan ugu magacdaray, heesta kooxda Qeylodhaam: “Xildhibaanimooy xaal qaado” oo anigu runtii aan aad uga helay, gaar ahaan iyo guud ahaan heesaha kooxdan, maadama ay ku soo beegmeen, xilli aad u xassaasi ah. Waa kooxdii labaad, oo nooceeda ah ee Soomaaliyeed ee samaysanta. Sanado ka hor, waxaan si fiican uga wada dharagnay, heesaha baraarujinta kooxda caan baxday, ee “Waayahacusub”, oo heeso wacyogalin ah dadka ku harqisay, xilli iyana loo baahnaa.
Maanta waxaan jeclaan lahaa, inaan waxyar ka iraahdo heestaa iyo sida loola falgalay ama wixii laga yiri.
Heesta hal ku dhaggeedu waa: “Xildhibaanimooy xaal qaado”, marka ay soo baxday, waxaan u dhagaystay si fiican, aamigo dhawr kol ku ceshtay, dhuuxayna erayada iyo ujeedka heesta,l. Maalmo ka dib, ayaan dhagaystay waraysi laga qaaday Prof Dalxa, oo uu ku dhaliilayo kooxda iyo gaar ahaanba heestan. Anoo fajacsan, oo leh war Prof-ka maxaa ku dhacay, oo qaaday? Fudaydka intaa la eg ku ma filayne? Maadaama kooxdan ay tahay koox, is kaa wax u qabso ku dhisan, cidna aan mushaarsiin, qolo gaar ah u heesin, kuna jirin xizbi siyaasaded, ka maansoodaan wixii taagan dabeedna ku codeeyaan.
Su’aalahaa iyo kuwo kale markay madaxayga ku soo dheceen, oon leeyahay: Allalayle Prof-ku wax dhihid ayuu u baahan yahay, ayaan waxaan dul sitaagay farshaxanka weyn ee Amiin Caamir oo ka hadlaya heesta iyo kooxdaba, markaan dhagaystay hadalkiisii ayaan iri: “Afkaaga caano lagu qabay”, wixii niyaddayda ka guuxayey ayaad sheegay, sidaana xilkii iiga dhacay, dad badanoo i la midana ka ridday, markaa baan haddana xasuusgalay, oo dib milicsaday, mise, waxaa ii muuqday muuqaal aysan niyaddaydu jeclaysan.
Haddana waxaan ku laabtay Prof-ka, oo aan su’aalo badan hordhigay, anihoo leh, war Prof ma i la xasuusataa kuraastii cascaseed ee Nayroobi? Mise waa hilmaantay, haddaad illowday waxaan ku leeyahay: “Alla Illowsha dhawaa ma umulaa?!”, maahmaah ahaan ayaan uga jeedaa, falka asigu ma samayn, balse, wadaaggu waa halmaamka, aniga prof waxay igu noqdeen laf dhuungashay iyo boog aan raysan. Su’aalaha ayaan sii waday oon iri: ma waxaad na leedahay xildhibaannadu wa xalaalquutayaal? Ma sidaa ayaad naga dhaadhicin ood donaysaa inaan ku qanacno? Waa ii dhadhami waysay markaasaan iri: “maya Prof taa iska illow, laga gudub xilligii dadku suuxsanaayeen, ee wixii la doono loo meerin jiray!”.
Hadalkii ayaan sii watay oon ku iri: waxaa noo joogaa kooxda Qaylodhaan, Waayhacusub, qoroyaal iyo mareego u heellin had iyo jeer soo gudbinta xaqiiqada, ku dhibtayaa ama jeclaataye!
Waxaan ku iri: kolley waa kuu jeedaa inaad qoonsataye, awood aad wax uga qabato ma lihide, ma sidii Sheekh Shariif ayaad habaarrami doontaa? Habaar hadduu wax qabanayo Sheekhuu wax u tari lahaa, markaas baan ku iri: “waxaad ii sheegtaa tuducda ku gubtay eed is la hayn waysay?!” Inta uusan ii jawaabin ayaan ku iri: “Sida caadada ah hadal walba waxa uu leeyahay reebe ama saare, waxaan uga jeedaa khaas yeelaha hadalka saara wixii soo dhexgali lahaa, mar waxay ka muuqataa hadalka, marna waxay kuba jirtaa oraahda, marna waxaa lagu gartaa dareenka iyo garashada.
Jawaab waafiyase ka ma halin, sida uusan u siin wariyihii waraysanayayba, haddaa muxuu hadal aan qusayn u soo dhexgalay? Mise waa meeshii laga yiri: “ Meesha bugta iyo fartaa is og!”, oo wuxuu is leeyahay adna waad soo galasyaa, hadduuba difaacay kuwaan arkay, hubaal inuu soo galayo, ama Prof ha ahaado ma ayuusan ahaan, waxaase la yaab leh Prof-ka aqoontiisii ma wuxuu ka doorbiday, inuu ku difaaco wadaadxumayaal iyo qabqableyaal, xildhibaanno sheegta? “Alla Anaa iska ba’ay” waa wixii lagu barooran jiray!
Maya sidaa ma ahan ee Prof-ka waa lagu duxay, oo yaa ku duxay? Soomaalidaa tiraa: “Dariskaa kuma caddeeyo, kumana madoobeeyo, ee siduu yahuu kaa dhigaa!”, waxaa ku neefsaday calooshood u shaqaystayaasha iyo xaraan ku naaxayaasha, marka wuxuuba is tusay ninkii xildibaan dhaliila, inuu isaga dhaliilayo. Prof ujeedku sidaa ma ahan, hadalkuna asiga ku ma quseeyo ee xasuusnoow, haddii kale, waxba ha is qarin, ee bannaanka isa soo dhig, waa la ka la dambayn ma ahane waddadaa lagu wada joogaa! Saw ma aragtid Wadaaddadii diinta ee shalay maanta sida ay u dhaqmayaan?!
Hadday sheekadaa gaaban ee dAden maaxadka ah na dhex martay aniga iyo Prof-ka, ayaa shalay lagu ka la dareeray kal fadhigii baarlamaanka, markaasan iri: Ar Proofoow ma dhex joogtaa mise waa dhuumatay? Anoo raba inaan dareen siiyo in kooxda Qayladhaan ka saxneyd, oo issgu bacaad cidla ah qoor sagaaro ku hayey, tagtadii dhacday 2004-tii iyadoo wali iga hari la’daday, ayaa waxaan daawaday muuqaal laga soo qaaday kulankii baarlamaanka, mise waa iyagii oon biyo ismarin, maba isbadalin oo waa sidoodii, ortii qayladii iyo qalalabtii ayey wali wadaan, waxaad mooddaa xoolalay taagan suuqaxoolaha, oo ku guda jira gorgortan iyo iga dhin, feerka iyo tumburyadu waa astaan ma hartaa, haddii la ka la dareeray maxay wali is ku sii hayaan?.
Xildhibaanadii Buuqa iyo Foodada ka riday Kulankii Baarlamaanka Nin lagu sheegayo inuu yahay xildhibaan ayaa firimbi soo qaatay markaasuu sidi nin waalan la dhex istaagay golihi shacabka isagoo weliba isla fiican..
Xildhibaano xishood ka arradan!
Waxaa noo caddaatay dadka ku jira barlamaanka qaarkood inay yihiin dad aan ka xishoon ummadda Somaliyeed oo meesha ay fadhiyaan xushmadda ay leedahay aan dareensaneyn. Xilalka ay ummadda u hayaan oo carabiga lagu yitaahdo MUSHARRAC (LAWMAKER) oo ah sharci dejiye inaysan u qalmin waana dad soo qaldamay oo mooday inay sidi ay rabaan u dhaqmi karaan iyagoon ka xishoon ummadda ka sugeysa inay dalkan samata bixiyaan, soo saaraan shuruuc lagu dhaqo dadka iyo dalka, gaarsiiyana doorasho ruux waliba xur u yahay codkiisa qofki uu rabana dooran karo.
Waxaa jira xikam Iyo axaadiith fara badan oo ka hadlaaya xishoodka waxaana ka mi ahaa xadiithkan ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء
Waxaa jira xikmad laga weriyay وهب بن منية من كساء الحياء ثوبه لم يرالناس عيبه
Annigoo wax ku baranaayo Milano Dalka Talyaaniga goor subax ah ayaa wargeeska (corriere della sera) sheekadaan ka Akhriyay……nin xoogaa madaxa looga jiro oo waalan ayaa la arkay asagoo baskillki carruurta ku dhex wata magaalada, markaasaa askari kuwa jidadka trafiko ah qabtay markasuu yiri “non ti vergogni a padellare la bicicletta dei bambini sulla strada principale”..Trafikadaani ma yaqaano ninkan inuu xoogaa khafiifsann yahay..markasuu ku jawaabay ninkii waalnaa “ tu sei peggio di me a fischiare sulla strada come un bambino”…micnaheedu waa askarigi uu yiri war ninyohow miyaadan xishoon markaad soo wadaneyso baaskiilki carruurta…ninkibaa wuxuu ku jawaabay adigaa iga liita oo sidi carruurti shaarciga firimbi la taagan!.
Nin lagu sheegayo inuu yahay xildhibaan ayaa firimbi soo qaatay markaasuu sidi nin waalan la dhex istaagay golihi shacabka isagoo weliba isla fiican..maxaa lagu sheegi karaa ninkaas?! Masu’uul maka naqan karyaa ummad oo xil ma loo dhiban karaa isaga iyo kuwa u sacbainaaya?!!!
Ugu dambayn waxaan dhihi lahaa Prof-ka, “waayuhu is badali maayaane, yuusan hadal kaa tagin”, haddii kale waxaad marti u noqon doontaa barnaamijka taxane ah ee “Labo Codleyn”, taasi handaad ma ahan, ee waa tusaalayn, maadaama aysan habboonayn ka la hadalka iyo isku dhexyaacu. Dhanka kale, waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa kooxda Qaylodhaan, oon leeyahay hawsha halkaa ka sii wada, ha u jooginnina doc ka yeer iyo hadaaqe toona. waxaad qabanaysaan bulshada ayaa garanaysa qiimahooda, nin iska dhex arkay erayadiina ma garan karo!
Waxaan ku soo afmeerayaa qormada erayada heesta “Xildhibaanimooy xaal qaado”, haddii aan meelaha qaar qaldo qaraalkeeda waa dhaga culays aan ka cudur daaranayo, saxnimadeeda waan soo dhawaynayaa, heestiina waa tan, ee ka haqab beela.
IQRA Read : Xildhibaanimooy xaal qaado
Xildhibaanimooy xaal qaado
Xushmad baa lagaa doonayaa
Haddaad xildhibaan tahaye
Xeerkood ilaalisaa habboon
Iyo xumaha ood diiddo
Qaaraan xilkaba qaadi karin
Yaab baa la soo xulaye.
Xeebaha kuwii iibsadoo
Ayaa xilka gaar naga hayoo
Xeerna kuu qabane
Dadka Kuwii xasuuqaa ku jira
Kuwii xumaan dhigaye
Xabaddoo dhacaysay rabaan
Amisom bay xayndaab ugu jiraan
Xabbaduhu waxay dilaan
Xaafad quray kuwada nool yihiin
Xafafka nabarrada qarsoon
Xanafta noo laaban
Xaalufka iyagaa noogu wacan
Xaquuqul Aadankay jabshaan
Xeer ma dhawraane
Xurmo malaha ruuxii dad yahaw
Xaaraan ku naaxaaye.
Illaa ay laaluush xaabsadaan
Xukun ma gooyaane
Xarbigu inuu sii socday daanayaan
Tan iyo xiixaaye
Xaqir bay naga dhigahayaan
Annagoo dawlad xoog badana.
Baarlamaan xoraan doonaynaa
Xiisa loo qabaan doonaynaa
Xaq inaad leedihiin dadweynow
Xukunku ha ogaado
Xaafadaha ka soo wada boxoo
Oo xamaasada kacshoo
Ilaa aad xaqiinnii heshaan
Yaan la xagaldaacin.
Xildhibaanimoow xaal qaado.
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Moment Media IQRA – Qaybta: 3aad ‘SHALAY IYO MAANTA’ Xusuusta Soomaaliya iyo caalamka